Home News Madaxweyne Farmaajo iyo Kheeyre oo Isku khilaafsan Maamulka Hay’adda Nisa iyo Xasilintii...
Madaxweyne Farmaajo iyo Kheeyre oo Isku khilaafsan Maamulka Hay’adda Nisa iyo Xasilintii oo Fashilantay (sababta ogoow)
Qorshihii xasilinta Caasimadda ee Muqdisho oo dhicisoobay kadib markii Madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyay in lafuro wadooyinka loo xiray sugidda amniga.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay shalay kadib markuu soo xirmay shirkii Barasalis.
Markuu xafiiska yimid ayuu aqriyay war bixintii xasilinta Caasimadda Muqdish isla markiiba wuxuu qaatay go’aan uusan kala tashanin xukuumadda.
Qoraalka kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha ayaa ahaa mid dhabar jab kunoqday laamaha uxil saaran sugidda amniga oo idil.
Waa in lafuro wadooyinka xiran si deg deg ah iyo si shuruud la’aan ah ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa safar shaqo Djibouti ah kumaqnaa xiligii uu soo baxay amarka Madaxweyne Farmaajo maantay ayuuna dalka dib ugu soo laabtay.
Xog aan kahelnay ilo ka ag dhaw Villa Somalia ayaa sheegaya in uu Madaxweyne Farmaajo amray in ciidanka Milatariga ay kahowl galaan xasilinta iyo sugidda amniga Caasimadda laga bilaabo berito.
Waxaa kaloo MUQDISHO ONLINE soo ogaatay in uu Madaxweyne Farmaajo dib ugu laabtay deegaan ahaan xarunta taliska ciidanka ee loo yaqaano gaashaandhiga.
Garabka Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa ayaguna kuhowlan in ay shaqadii ay waday NISA halkeedi kasii socoto maadaama aysan weli dhamaanin mudadii sadaxda bilood aheeyd ee uu qabsaday Ra’iisul Wasaare Khayre in uu ku xasiliyo Caasimadda.
Ra’iisul Wasaare Khayre kuma qanacsana go’aanka kasoo baxay xafiiska Madaxweyne Farmaajo kamana uusan filaneeyn in uu fashiliyo shaqadii uu waday labo bilood.
Tilaabada uu Madaxweyne Farmaajo qaaday maantay waxay dhalin kartaa qilaaf culus oo keeni kara bur bur ayuu yiri Hassan – Qoraaga Siyaasada Soomaaliya
Dhanka kale baaris ay wado MUQDISHO ONLINE oo kusaabsan qarashka 9ka milyan ah ee kubaxay qorshaha xasilinta Caasimadda ayaa waxaa kasoo ifaya in madaxda sare ee UN iyo EU ay isku qilaafsan yihiin maadaama aysan lacagta baxeeysa laheeyn xisaab celis laga rabo xafiiska Ra’iisul Wasaare Khayre.
Madax sare oo katirsan xafiiska EU ee fadhigiisu yahay xarunta Xalane ayaa usheegay MUQDISHO ONLINE in wax qarash ah oo xisaab la’aan bixi kara aysan jirin lagana rabo xafiiska UN in ay keenaan xisaab celin.
Xiritaankii wadooyinka ayaa sii baahay oo gaaray heer in laxiro luuqyadii ay mari lahaayeen baabuurta shacabka degan xaafadaha iyo gaarida adeega usida deegaamadda.
Baarlamaankii la xisaabtami lahaa fawdada socota wuxuu kumaqan yahay fasax aan sababtiisa la aqoonin mudadiisuna ay u eg tahay kala dir.
Maxaa keenay go’aanka deg dega ah ee uu Madaxweyne Farmaajo qaaday?
Previous articleRW Kheyre oo ku fashilmay in uu la kulmo Mudulood. Kulankii oo baaqday
Next articleIn Sirta Qaranka Banaanka la keeno oo loo dhaco Xafiisyadda Dowlada, ma jirto qiyaano ka weeyn!!
Gudiga doorashada Galmudug oo fariin u diray Musharixiinta diidan in ay...
Ururka Al Shabaab oo waraaqo digniin ah ku daadiyay Gobolka Gedo